Ady amin’ny Covid-19: mila fikarakarana manokana ireo razana | NewsMada
Ady amin’ny Covid-19: mila fikarakarana manokana ireo razana
Par Taratra sur 12/08/2020
Nitondran’ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka fanazavana manokana, omaly, ny fomba fikarakarana ny razana, ho an’ireo matin’ny Covid-19. Saropady ary olona efa niofana manokana no afaka mandray an-tanana ny fikarakarana ireny razana ireny tsy hiparitahan’ny aretina.
Mampiasa ny fitaovam-piarovana rehetra eo am-panatanterahana izany ary manaraka ny tari-dalana momba ny fanadiovana ny razana.
Raha maty any amin’ny hopitaly ilay marary, anjaran’ny tompon’andraikitra any amin’ny tranom-paty ny fikarakarana, tomombana tsara izany vao raisin’ny fianakaviana ny razana ary tsy azo vahana intsony.
Raha eto Antananarivo kosa fa ivelan’ny hopitaly no maty ilay mararin’ny Covid-19, anjaran’ny BMH ny mikarakara ny razana. Iandraiketan’ny mpiasan’ny distrikam-paritra kosa ny fikarakarana raha toa ka ivelan’ny Renivohitra ny misy ilay razana.
Tsy maintsy fonosina amin’ny lamba tsy lena (sachet plastique en tube) ary rarahina hatrany HTH avy. Fonosina lamba mena araka ny fomba ihany anefa izy avy eo. Hidina anaty vata efa voaomana ary fantsihina tsara. Mbola rarahina indray HTH izany vata izany avy eo.
Momba ny fandevenana, tanterahina araka izay haingana indrindra ny fanitrihana ny razana. Ireo fianakaviana vitsy tena akaiky ihany no manatanteraka izany. Azo alevina am-pasan-drazana raha voahaja ny fepetra tamin’ny fikarakarana. Tsy azo avadika na afindra toerana ny razana ao anatin’ny roa taona, farafahakeliny…